Afa-po Tamin’​ny Fiainany i Jesosy
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Nzema Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Tzotzil Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
AFA-PO tamin’ny fiainany tokoa ve i Jesosy? Tso-piaina mantsy ny fianakaviany ary tsy dia nanan-javatra firy izy mandra-pahafatiny. Nilaza mihitsy aza izy fa ‘tsy mba nanana izay nametrahany ny lohany.’ (Lioka 9:57, 58) Ankoatra izay, dia tsy tian’ny olona izy, noharatsina, ary novonoin’ny fahavalony mihitsy tamin’ny farany.
Mety hieritreritra ianao hoe: ‘Fiainana hoatr’izany ve dia mahafa-po?’ Mbola nisy zavatra hafa tokony hodinihintsika koa anefa. Andeha isika handinika efatra amin’izany.
1. NY HANAO NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA NO TANJON’I JESOSY.
“Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’ilay naniraka ahy.”—Jaona 4:34.
Niezaka nanao ny sitrapon’i Jehovah Rainy foana i Jesosy, na tamin’izay noteneniny na tamin’izay nataony. * Tena nahafinaritra azy ny nanao an’izany. Noheveriny ho toy ny sakafo mihitsy aza izany, araka ny andinin-teny etsy ambony. Nahoana izy no nieritreritra an’izany?
Tamin’ny 12 ora antoandro tany ho any i Jesosy no nilaza an’io. (Jaona 4:6) Vao avy namakivaky ny faritra be tendrombohitra tany Samaria izy ny maraina tontolo, ka azo antoka fa noana. Hoy mihitsy aza ny mpianany: “Mihinàna, Raby ô!” (Jaona 4:31) Hita tamin’ny valin-tenin’i Jesosy anefa fa toy ny hoe voky sy natanjaka izy nanao ny sitrapon’Andriamanitra. Tsy hita amin’izany ve hoe afa-po tamin’ny fiainany izy?
2. TENA TIAN’I JESOSY NY RAINY.
“Tiako ny Ray.”—Jaona 14:31.
Mpinamana be i Jesosy sy ny Rainy, tany an-danitra. Tena tiany ny Rainy ka nampahafantariny ny olona ny momba azy. Anisan’izany ny anarany, ny zavatra kasainy hatao, ary ny toetrany. Tena nanahaka ny Rainy i Jesosy, tamin’izay nolazainy sy nataony ary tamin’ny toetrany, hany ka rehefa mahafantatra an’i Jesosy isika dia hoatran’ny hoe mahita ny Rainy mihitsy. Nisy fotoana, ohatra, i Filipo nilaza tamin’i Jesosy hoe: “Asehoy anay ny Ray.” Dia hoy i Jesosy: “Izay nahita ahy dia nahita ny Ray koa.”—Jaona 14:8, 9.
Tena tian’i Jesosy loatra ny Rainy, ka nankatò azy foana izy na nihatra aman’aina aza izany. (Filipianina 2:7, 8; 1 Jaona 5:3) Izany no tena nahatonga azy ho afa-po tamin’ny fiainany.
3. TIA OLONA I JESOSY.
“Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny mahafoy ny ainy ho an’ny namany.”—Jaona 15:13.
Mpanota isika olombelona ka toa manjombona ny hoavintsika. Hoy ny Romanina 5:12: “Tahaka ny nidiran’ny ota avy [tamin’i Adama] ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka niely tamin’ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra.” Tsy maintsy hiharan’ny vokatry ny ota, dia ny fahafatesana, àry isika ary tsy ho vitantsika samirery ny hiala amin’izany.—Romanina 6:23.
Soa ihany i Jehovah fa tia ny olombelona, ka nitady vahaolana. Manana Zanaka lavorary sy tsy misy ota izy, ary nantsoina hoe Jesosy izy io rehefa nanketỳ an-tany. Navelany hijaly sy ho faty izy io mba hanavotana antsika amin’ny ota sy ny fahafatesana. Tian’i Jesosy ny Rainy sy ny olombelona ary tsy mba nitaky valiny izy tamin’izany. Nankatò an-tsitrapo àry izy, ary nanome ny ainy lavorary ho antsika. (Romanina 5:6-8) Izany koa no nahatonga azy ho afa-po tamin’ny fiainany. *
4. FANTATR’I JESOSY FA TIA AZY NY RAINY SADY MANKASITRAKA AZY.
“Io no Zanako malalako, izay sitrako.” —Matio 3:17.
Tamin’i Jesosy natao batisa no nilaza an’ireo teny ireo avy tany an-danitra i Jehovah. Nampahafantariny ny olona rehetra àry fa tiany i Jesosy Zanany ary nankasitrahany. Ara-dalàna i Jesosy raha nirehareha hoe tian’ny Rainy izy. (Jaona 10:17) Lasa nahavita niaritra àry i Jesosy rehefa nisy nanohitra sy nanakiana. Tsy natahotra ny ho faty mihitsy koa izy. (Jaona 10:18) Tsapan’i Jesosy izany fitiavan’ny Rainy azy izany, ka vao mainka izy afa-po tamin’ny fiainany.
Hitantsika amin’izany fa tsy nahatsiaro mihitsy i Jesosy hoe tsy nisy dikany ny fiainany. Afaka manahaka azy àry isika raha te ho afa-po amin’ny fiainana. Nanome torohevitra momba izany i Jesosy ary hiresaka an’izany ny lahatsoratra manaraka.
^ feh. 6 Jehovah no anaran’Andriamanitra araka ny Baiboly.
^ feh. 15 Manazava bebe kokoa ny vidim-panavotana nataon’i Jesosy ny toko 5 amin’ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.